October 10, 2021 - Babal Khabar
Oct102021 by बबाल खबरNo Comments
यस कारणले गर्दा एउटै गाेत्र भित्र विवाह चल्दैन !
काठमाडाैं । विवाहको सम्बन्धमा हरेक समाज वा धर्मको आफ्नै नियम छ । यो नियमको हजारौं वर्ष देखि पालन हुँदै आएको छ । हिन्दु धर्ममा प्रायः मानिसहरू एकै गोत्रमा विवाह गर्न उचित मान्दैनन् । हामी एउटै गोत्रमा विवाह गर्न नहुने मान्यताको बारेमा चर्चा गर्छौ । शास्त्रअनुसार ऋषि विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्धाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप र अगस्त्य गरी आठ ऋषि गोत्र सम्बन्धित हुन्छन् । यदि कोही व्यक्ति भारद्धाज गोत्र भएमा उसको पिढी ऋषि भारद्धाजसँग सम्बन्धित हुन्छन् । अर्थात ती व्यक्ति भारद्धाज ऋषिका सन्तान हुन् । यदि कोही दुई जना एक गोत्र हुनुको अर्थ दुवै जना एकै मूलका र एकै कुल वंशका हुन् । दुवैबीच पारिवारिक नाता हुन्छ । उसाे त एकै गोत्रमा विवाह गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन किनकि एकै गोत्रको केटा र केटी एक अर्काका भाईबहिनी हुन्छन् । एकै कुलका वा एकै गोत्रमा विवाह गर्दा मानिसहरूले जीवनमा केही स
घर सबै चोरी सकेर जाने बेला चोरले ‘भाउजु निकै राम्री हुनुहुन्छ’ लेखेपछि ! काठमाडौं छठमा आफ्नो घरमा ताल्चा लगाएर गाउा जानु एक व्यापारीका लागि निकै महागो साबित भयो । सुरुमा चोरले ६० लाख नगद चोरे र जाादा जाादै व्यापारी र उनकी श्रीमतीबारे ऐनामा आफ्ना भावना पनि लेखे । घटना भारतको पटनाको पत्रकार नगरको हो । पुलिसका अनुसार यहााका एक व्यापारीको घरमा चोरले ६० लाख नगद, गहनाबाहेक घरका हरेक महागा सामान चोरे । चोरले घर भित्रको मञ्जनसमेत पनि नछोडेको बताइएको छ । चोरले लिपस्टिकले ड्रेसिङ टेबलको सीसामा ‘भाउजु निकै राम्री हुनुहुन्छ’ लेखे भने दाइ अर्थात् व्यापारीका लागि भने उनीहरुले अपशब्दको प्रयोग गरे ।चोरले थप लेखे, ‘भाउजु धन्यवाद, भगवानको कृपाले तपाईं धेरै उन्नती गर्नुहोस् ।’ चोरहरुले दराजदेखि खाट वरिपरिका सबै कुरा अस्तव्यस्त पारिदिएको बताइएको घटनास्थलका फोटो हेरेर भन्न सकिन्छ । पीडितले पत
फेसबुकमा लभ परेर भेट्न जाँदा आफ्नै बुहारी !
हेर्नुस भिडियो, कहिल्यै नभेटका र नदेखेकाहरु फेसबुकमार्फत सहजै साथी बन्छन् । कतिको घरबार बिग्रिएको छ भने कतिले बिहेबारी समेत यही फेसबुकले गराइदिएको छ । कुरू केहि समय अगाडिको हो चीनमा यस्तै भएको छ । कहिल्यै नभेटेका र नदेखेका जो कोही पनि फेसबुक मार्फत् साथी बन्न सक्छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** अनलाइनमा साथी बनेर माया प्रेम समेत बसेपछि भेट्न जाँदा आफ्नै ससुरा बुहारी परेपछि वित्यास । चीनको हेलोगजियांग प्रान्तमा यो घटना भएको थियो । ससुरा बुहारी दुबैले आफ्ना पत्नी र पतिलाई छलेर फेसबुकमा कुराकानी गर्दर्थे ।दुबैले तस्वीर राखेका थिएनन् । नाम र तस्वीर काल्पनिक राखेर कुराकानी गर्दथे ।५७ वर्षे ससुरा वागं र बुहारी लिलीका बिच लामो समय सम्म फेसबुकमै कुराकानी भयो कुराकानीका क्रममा वागंले आफु एउटा कम्पनीको कालीक भएको र श्रीमतीको मृत्यु भएको बताउँथे भने बुहारीले आफ्ना श्रीमान् जेल
पो’र्न, फि; ल्म, हेर्दा भिडियोमा आफ्नै श्रीमती देखेपछि…
पुरा खबर, छिमेकी मुलुक भारतको बैंगलोरमा एउटा अनौठो घटना भएको छ । एकजना पुरुषले इन्टरनेटमा पो’र्न, भि; डियोहरु हेर्दै गर्दा एक्कासी एउटा भिडियोमा आफ्नै श्रीमतीलाई कुनै अ’प,रिचित पुरुषसँग यौ; न क्रि’डा, गरिरहेको देखेपछि उनको सा’तो,पुत्लो मात्र उडेन पारिवारिक विखण्डन नै हुनपुग्यो । समाचार अनुसार आफ्नै श्रीमतीको पो’र्न, भि; डियो देख्न पुगेका ती ३३ वर्षीय पुरुष उत्तर प्रदेशका हुन् भने उनकी पत्नी कलकत्ताकी हुन् । बिहेपछि उनीहरु दुवैजना बैंगलोरमा बस्दै आएका थिए । बिहेबारीका लागि जोडी जुराइदिने वे,बसाइटमार्फत नै चिनाजानी गरेर सन् २०१८ मा उनीहरुले बिहे गरेका थिए । आफ्नो बिहेअगाडि कुनै पुरुषसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको र पछि ब्रेकअप भएको कुरा ती महिलाले आफ्नो लोग्नेलाई बताएकै थिइन् । लोग्नेले श्रीमतीको त्यो यथार्थलाई स्वीकार गरेरै बिहे गरेका थिए । बिहेपछि ती महिला पतिलाई प्रायः पो’र्न, फि,
श्री’मानका यी साना ग’ल्तिले यसरी बि ग्रिन्छन् श्रीमती !
पुरा खबर, वै’देशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु नेपालमा बि’ग्रिएको धेरै समाचार प्र’कासनमा आएका छन् । श्रीमानको कमाइमा श्रीमातीको म स्ती, विदेशमा श्रीमानलाई सास्ती, नेपालमा श्रीमतिको अ’र्कैसंग म स्ती, जस्ता हेडलाईनहरु दैनिक जसो समाचारपत्रमा आइरहेका छन् सुनौलो सपना बोकेर वि’देशीएका श्रीमानले पठाएको पैसा नेपालमा बसेर अ’र्कैलाई ख्वाउने, प्या’उने र अन्त्यमा श्रीमानको सबै कमाई कुम्ल्या’एर अ’र्कैसंग भागेका कुराहरु हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौं । प्राय आफ्नै लापर’बाही र धेरै बिश्वास दिनुले गर्दा हुने गरेको एक श्रीमति पी’डितहरुको भनाइ र उनीहरुको अनुभवले देखाएको छ ।आखिर के का’रणले हो त। बिदेशमा गएका पु’रुष हरुको प्रा’य घर बि’ग्रिनु। उनीहरुका श्रीमतिहरु ग’लतबाटो रोज्न। एउटा तितो एथार्थ हामीले विभिन्न पिडित व्यक्तिका अनुभवहरुलाई मार्फत संकलन गरी प्रस्तुत गरेका छौं । यसको मतल
घाममा याै; न स; म्ब’न्ध राख्नुका फाइदै फाइदा !
पुरा खबर, सूर्यको प्रकाशमा व्यक्तिको का; मोत्ते’जना बढाउने शक्ति हुन्छ। सूर्यको प्रकाशले व्यक्तिको कामो’त्तेजना बढाउन सहयोग पु-याउँछ। पुरुषको हकमा सूर्यको प्रकाशले टेस्टेस्टेरोनजस्तो पुरुष हार्मोनको सक्रियता बढाउँछ। जसका कारण कम यौ; न चाहना भएका पुरुषमा समेत कामोत्ते’जना आई यौ; न स’म्पर्क गर्दा पूर्णतया यौ; नजन्य स’न्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। पुरुषमा टेस्टोस्टेरोन हार्मोनको मात्रामा वृद्धि हुँदा का’मोत्तेजित भई उच्च यौ; ना नन्द लिन सकिन्छ। सूर्यको तापबाट भिटामिन ‘डी’ पाइने भएकाले घाम ताप्न आवश्यक हुन्छ। घामको प्रकाशबाट यौ; नका लागि मात्र नभई शरीरलाई उपयोगी र आनन्द दिने तत्व पाइन्छ। सूर्यको तापले क्याल्सियमसमेत पाइने भएकाले घाम ताप्नाले यौ’नजोडीको यौ; निक उमंगमा सहयोग पुग्छ। जसको फलस्वरुप यौ; निक अंगहरु खुम्चन र फुल्न मद्दत पुग्छ। यौ; न स; म्प’र्कका क्रममा यौ; नांगको खुम्चने र फुक्न
म’ध्यराति अचा’नक महिलाको श’री’रमा केहि टाँ’सि’यो, अनि नि’का’ल्न थल्यो विचि’त्रको आ’वा’ज
एजेन्सी। बिहारको मंगेर जिल्लाकी एक महिलाको ज्या-न त्यतिबेला सं-क’टमा पर्यो जतिबेला मध्यरातमा अचा-नक उनलाई एक ना गले बेर्यो। वि चित्रको आ’वा’ज सुनेपछि निन्द्राबाट ब्यूँ-झिएकी महिला आफ्नो शरीरलाई ना गले बेरेको देखेपछि उनको हो श उ ढ्यो। र ड रका कारण उनको आवाज पनि निस्किएन। बिहारको मंगेर जिल्लाको इटहरी पंचा-यतको कल्याणटोला गाउँमा मनोज मण्डललकी पत्नी पुतुल देवीको शरीरलाई करिब डेढ घण्टासम्म नागले बेरेर राखेको थियो। राति सुतेको बेला एक स र्पले उनको बायाँ खुट्टालाई बेरेको थियो। जब आफूलाई अप्ठे-रो महशुस भएपछि उनको निन्द्रा खुल्यो र हेर्दा उनको हो श नै उ-ड्यो। त्यसपछि उनको परिवार र छिमेकी त्यहाँ पुगेर भगवानको नाम जप्न थाले। त्यसपछि सो स र्प आफैं त्यहाँबाट गयो। ती महिलाका अनुसार उनी भूँयमा सुतेकी थिइन्। उनको खुट्टा झुलभन्दा बाहिर थिए। राति २ बजे आफ्नो खुट्टामा केही भएजस्तो लागेपछि उठेर
पुरा खबर, केही घटना निक्कै अनौठा लाग्छन् ।सुन्दापनि जो कोही चकित बन्छौ । सहोदर बहिनीले आफ्नै दाजुको बच्चा जन्माइदिने भन्ने कुरा हाम्रो समाजमा त कल्पना गर्न सकिँदैन । तर अमेरिकामा हालै एउटा यस्तै घटना भएको छ । अमेरिकाको वाशिंटनमा एकजना युवतीले आफ्नै दाजुको बच्चा जन्माइदिएकी छिन् ।आफ्ना दाजुको पाँचौं बच्चाको इच्छा पूरा गरिदिन ती युवतीले भाडाको आमा बनेर अर्थात् सरोगेसी मदरको माध्यमबाट बच्चा जन्माइदिएकी हुन् । डेलीमेलको खबर अनुसार ती पुरुषका पहिले नै ४ वटा बच्चा थिए । तर उनलाई थप एक बच्चा जन्माउने इच्छा थियो ।पाँचौं बच्चा जन्मिएपछि मात्र आफ्नो परिवार पूर्ण हुन्छ भन्ने उनको मान्यता थियो । तर स्वास्थ्य समस्याका कारण उनकी पत्नीले पाँचौं बच्चा जन्माउन सक्ने अवस्था थिएन । आफ्ना दाजु–भाउजूको त्यो अवस्था देखेर २७ वर्षीया बहिनीको मन पग्लियो । हिल्दे पेरिंगरे नामक ती युवतीले दाजुका लागि
पुरा खबर, फेसबुकमा आइडि बनाएर साथी बनाउने र कुराकानी गर्ने अहिले युवा युवतीबिच सामान्य कुरा भएको छ । तर, फेसबुकको कुरालाई पत्याएर प्रेम परी बिहेसम्म पुगेको एक घटनामा केटीको बास्तविकता थाहा पाएका केटाले देह त्यागको प्रयास गरेका छन् । यो घटना भारतको हो । आगरामा फेसबुकमा एउटी महिलाले किशोरलाई आफ्नो प्रोफाइलमा आफ्नो उमेर १८ बर्ष लेखेर मित्र बनाइन् । दुवैले फोनमा कुरा गरिरहे । किशोरले एक महिना अघि भेट्न ती युवतीलाई बोलाए । दुबैले दिल्लीमा स्टेसनमा लकडाउनमा भेटे । पहिलो भेटमा केटीको यथार्थता थाहा पाएपछि किशोर किशोरी बेहोस भए । घर आउँदै गर्दा उनले देह त्यागको बिचार । मनमा ल्याए । चाइल्ड लाइनले किशोरलाई परामर्श दियो । त्यसपछि उसले आफ्नो विचार परिवर्तन गरे । किरवलीका १८ वर्षीय किशोरले छ महिना अघि फेसबुकमा मित्रता गाँसेका थिए । उमेर १८ बर्ष फेसबुक मित्रको प्रोफाइलमा लेखिएको थियो । फोट